Uluhlu lwee-ecommerce Uluhlu lokutshekisha: Eyona nto kufuneka uyiThobile kwiVenkile yakho ye-Intanethi | Martech Zone
Esinye sezona sithuba sithandwa kakhulu ekwabelwana ngaso kulo nyaka kukudibanisa kwethu Uluhlu lwewebhusayithi luluhlu lokutshekisha. Olu infographic lulandelelo olulungileyo yenye iarhente enkulu evelisa infographics engakholelekiyo, intengiso ye-MDG.
Zeziphi izinto zewebhu ezentengiso ezibaluleke kakhulu kubathengi? Yintoni ekufuneka yenziwe ziimpawu, ixesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali ekuphuculeni? Ukufumanisa, sajonga uninzi lophononongo lwamva nje, iingxelo zophando kunye namaphepha emfundo. Ukusuka kolo hlalutyo, sifumanise ukuba abantu kuyo yonke imimandla kunye ngokuthe nkqo bahlala bexabisa amanqaku afanayo ewebhusayithi xa bethenga kwi-Intanethi. Yintoni efunwa ngabathengi kwiiwebhusayithi ze-E-Commerce
Iziphumo zophando lwabo kunye nophando lweengcali zikhokelele kwizigaba ezi-5 eziphambili ezihamba ngokubaluleka kwenkampani ye-ecommerce yokuqhuba ulwazi, igunya kunye notshintsho. Ndongeze ezinye izinto endizithandayo ezaphoswa ziziphumo zophando.
I-47% yabathengi ithi ukusebenziseka kunye nokuphendula zezona zinto zibaluleke kakhulu kwiwebhusayithi ye-e-yorhwebo
isantya -Indawo ye-ecommerce kufuneka ikhawuleze. Abathengisi aba-3 kwaba-4 bathi bayakushiya iwebhusayithi ye-e-yorhwebo ukuba ayicimi
Intuitive Ukuhamba-hamba, izinto eziqhelekileyo zenqwelo, kunye neempawu zesiza kufuneka kube lula ukuzifumana kunye nokuzisebenzisa.
noluphendulayo -I-51% yabo bonke abantu baseMelika bathenga kwi-intanethi ngeselula, ke ivenkile kufuneka isebenze ngaphandle komthungo kuzo zonke izixhobo.
Ukuhambisa ngenqanawe -Iindleko zokuhambisa ezibizayo kunye namaxesha amade okuhambisa aya kuba nefuthe kwintengiso.
ukhuseleko -Qiniseka ukuba uphuma uphele kwisatifikethi se-EV SSL kwaye upapashe iziqinisekiso zophicotho-zincwadi zomntu wesithathu.
Umthetho WOKUBUYISA -Ndazisa iindwendwe umgaqo-nkqubo wakho wokubuyela ngaphambi kokuba zithenge
Inkonzo eyenzelwe -Bonelela ngengxoxo okanye inombolo yefowuni ukuphendula kwintengiso okanye kwizicelo zenkonzo.
Ulwazi oluBanzi lweMveliso
Iindwendwe zihlala zingakulungelanga ukuthenga, ngokwenene zilapho ukuze ziphande. Xa unika lonke ulwazi abaludingayo, baya kuba nakho ukuthenga xa iphelele.
Iinkcukacha Product -77% yabathengi bathi umxholo uphembelela isigqibo sabo sokuthenga
Umbuzo kunye neempendulo -Ukuba ulwazi alukho, iipesenti ezingama-40 zabathengi abakwi-Intanethi bafuna iindlela zokubuza imibuzo kunye nokufumana iimpendulo ngaphambi kokuthenga
ukuchaneka - Iipesenti ezingama-42 zabathengi babuyisele ukuthengwa kwi-Intanethi ngenxa yolwazi olungachanekanga kwaye i-86% yabathengi bathi ngekhe babenakho ukuphinda bathenge kwindawo abayithenge kuyo.
Ikhona evenkileni -Akukho nto iphazamisayo njengokufumana yonke indlela yokuphuma ngaphambi kokuba ufumanise ukuba imveliso iphelile. Gcina indawo yakho kunye neziphumo zophando zihlaziyiwe ngobume besitokhwe usebenzisa iziqwengana ezityebileyo.
Imifanekiso, imifanekiso, imifanekiso
Abandwendweli bahlala bekhangela iinkcukacha ezibonakalayo kwiimveliso kuba bengekho ukuze babahlole ngokobuqu. Ukukhetha imifanekiso ephezulu yesisombululo esiphakamileyo kuya kuqhuba ukuthengwa okongeziweyo.
Imifanekiso emininzi - Iipesenti ezingama-26 zabathengi bathi bakushiyile ukuthengwa kwe-Intanethi ngenxa yemifanekiso ekumgangatho ophantsi okanye imifanekiso embalwa kakhulu.
Izigqibo eziPhakamileyo -Ukubonelela ngesakhono sokubona iinkcukacha ezigqityiweyo kwizinto zeefoto kubaluleke kakhulu kubathengi abaninzi abakwi-Intanethi.
Zoom -71% yabathengi basebenzisa rhoqo ukusondeza in iifoto zemveliso
isantya -Qiniseka ukuba imifanekiso yakho icinezelwe kwaye ilayishwe kwinethiwekhi yokuhambisa umxholo ukuqinisekisa ukuba zilayishwe ngokukhawuleza. Unokuba unqwenela nokuthumela umthwalo kwimifanekiso engakhange ijolise kuyo (njengakwi-carousel).
Ukulinganisa kunye Reviews
Ukubandakanya uphononongo / amanqaku angakhethi cala kwindawo yakho kuya kubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokujonga kunye nokwakha ukuthembela kubakhenkethi. Ngapha koko, iipesenti ezingama-73 zabathengi bafuna ukubona ukuba bathini abanye abathengi ngaphambi kokwenza isigqibo
Engasetyenziswanga - Abathengi abayithembi imilinganiselo egqibeleleyo, baphanda iireyithingi ezingalunganga ukuze babone ukuba izimvo zabanye ngemveliso ziya kuba nefuthe kwisigqibo sabo sokuthenga.
Iqela lesithathu -50% yabathengi bafuna ukubona uphononongo lwemveliso yomntu wesithathu
Ezahlukahlukeneyo - Abathengi bafuna ukuziva bekhululekile malunga nokuthenga, bafuna ukubamba iinkampani ukuba ziphendule, kwaye bafuna ukubona iindidi zokujonga ezijolise kumgangatho nakukhuseleko lweemveliso.
Iincukuthu -Yandisa ukusebenza kokulinganisa kwakho kunye nokuphononongwa usebenzisa izityebi ezizityebi ukuze zibonakale kwiziphumo zokukhangela.
Uphendlo lweeMveliso ezikwiSayithi
Ukukhangelwa kwesiza kubalulekile kuwo onke amava e-e-commerce. Abanye abathengi, iipesenti ezingama-71 zabathengi bathi bahlala besebenzisa uphando, kwaye ihlala iyinto yokuqala abaya kuyo kwindawo.
Gcwalisa ngokuzenzekelayo -Yakha ekusebenzeni okupheleleyo okuzenzekelayo okucoca amagama emveliso, iindidi, njl.
Ukukhangela kwe-Semantic -Sebenzisa ukukhangela kwe-semantic ukuhambisa iziphumo ezingcono
Iifayile - 70% yabathengi bathi bayakuxabisa kakhulu ukukwazi ukucoca iimveliso ngokukhangela indawo
Ukuhlela -Ukwazi ukuhlela uluhlu, ukuthengisa kunye namaxabiso konke kuluncedo kubasebenzisi ukufumana iimveliso abazifunayo.
Iintyikrakra -Bandakanya izinto zokuhamba, ezinje ngeesonka kwiimakhasi ziphumo
Iziphumo ezineenkcukacha - bonisa imifanekiso kunye nokulinganiswa ngaphakathi kweziphumo zophando
The lekiso -Nika ithuba lokuhlalutya amanqaku emveliso kunye namaxabiso ecaleni.
tags: Gcwalisa ngokuzenzekelayoncokolaabathengiInkonzo eyenzelwee-commerceecomeCommerceecommerce izityebi ezityebileyoIsantya se-ecommercehtwebemdg intengisozorhweboopengraphuthelekiso lwemvelisoizihluzi zemvelisoUkukhangelwa kwemvelisoukuhlelwa kwemvelisoimibuzo kunye nezimpenduloukulinganisaumthetho WOKUBUYISAReviewsschemeukhuselekoukukhangela semanticUkuhambisa ngenqanaweukukhangela indawointongayenza nkulu